Apple Music waxay fanaaniinta siisaa labo jibbaar inta ay ka bixiso Spotify | Waxaan ka socdaa mac
Apple Music waxay siisaa farshaxanno laba jibbaar ka badan midka Spotify
Apple waxay soo daabacday maqaal ku saabsan codsiinta Apple Music for Artists, oo ah barxad ay dhamaan fanaaniinta laga heli karo bartaan ay marin u helaan, oo ay la socdaan faahfaahin aad u tiro badan, heesaha lagu ciyaarayo bartaan, wadan burbursan, heeso, albums oo ay weheliso dakhliga ay soo saaraan de adeeggan.
Warqaddan, Apple waxay ku sheegaysaa taas wuxuu ku bixiyaa dinaar gabay kasta oo lagu ciyaaro barxadooda Iyo in 52% dakhliga kaqeyb galka ah uu aadayo fanaaniinta, sifiican, inbadan oo kamid ah calaamadaha diiwaanka, sidaa darteed ugu dambeynti farshaxanlayaashu waxay helayaan qadar aad uyar.
Maqaalkan, oo ay heshay The Wall Street Journal, Apple wuxuu sheegayaa inuu doonayo si faahfaahsan uga pagos, Maqaal la daabacay isla waqtigaas oo Boqortooyada Midowday ay ku dhawaaqday inay baareyso in adeegyada qulqulka muusikada ay runti u caddaalad tahay fanaaniinta.
Apple wuxuu sheegayaa:
Maaddaama doodda ku saabsan sii deynta royalties ay sii socoto, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in lala wadaago qiimaheena. Waxaan aaminsanahay bixinta hal abuure kasta isla ujirka, in shaqadu qiimo leedahay iyo in abuurayaashu aysan waligood ku bixin qarashka muusikada la dalacsiiyay.
Lacag bixinta Spotify way ka yara adag yihiin maaddaama ay ku jiraan labada kuwa laga helay rukummada (hadda waxay ka badan tahay 150 milyan oo macaamiil ah) iyo dadka isticmaala nooca bilaashka ah ee xayeysiiska ah.
The Wall Street Journal waxay sheegaysaa in Spotify ay bixiso inta udhaxeysa 50 iyo 53% farshaxanada, si kastaba ha noqotee, celcelis ahaan, shirkadda Sweden waxaad bixineysaa kala bar waxa Apple taranka kasta. Xitaa sidaas oo ay tahay, Spotify ayaa bixisa wax ka badan tan Apple iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tirada badan ee macaamiisha ah, oo ay weheliyaan adeegsadayaasha nooca bilaashka ah, marka lagu daro wadar ahaan 345 milyan.
Markii ugu dambeysay ee Apple ay shaaciso nambarada macaamiisha, waxay ahayd bartamihii-2019, marka tiradaas hadday ahaan lahayd 60 millones. Horaantii 2020, Amazon waxay sheegatay in, ka mid ah adeegyada hoorinta muusikada kala duwan ee ay bixiso, ay lahayd 55 milyan oo isticmaale firfircoon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Music waxay siisaa farshaxanno laba jibbaar ka badan midka Spotify
Sida loo daawado dhacdada Apple ee 20ka Abriil khadka tooska ah
Apple waxay nagu martiqaadaysaa socod Jane Jane Fonda Maalinta Dunida